Bilaha Jarmalka iyo xilliyada (Monate)
Asxaabta qaaliga ah, waxaan ku arki doonaa maalmaha, bilaha iyo xilliyada jarmalka casharkeena loogu magac daray bilaha Jarmalka iyo xilliyada Jarmalka. Ka dib barashada higaada iyo ku dhawaaqida bilaha, xilliyada iyo maalmaha ee Jarmalka, waxaan ku tusi doonaa jadwalka iyo Bilaha iyo maalmaha Jarmalka Waxaan baari doonaa sida loogu qoro jadwalka.
Adoo ku siinaya muuqaallo badan mawduuceena, waxaan ka dhigi doonnaa mawduuca si fiican loo fahmay oo la xusuusnaan karaa. Maaddaama mawduuca maalmaha, bilaha iyo xilliyada Jarmalku yahay maado si weyn looga adeegsado nolol maalmeedka, waa maaddo ay tahay in si fiican loo barto.
Sidaad ogtahay, sanadkiiba waxaa jira 12 bilood. Bilahaaga oo af Ingiriisi ah hadlay Bilahaaga Jarmalka Ku dhawaaqida iyo higgaadda ayaa aad isugu eg. Xaqiiqdii, akhriska iyo higgaadinta bilaha afkeenna turkiga waxay la mid tahay ku dhawaaqidda iyo higgaadinta bilaha Jarmalka. Bilaha Jarmalkamowduucyada sida maalmaha, xilliyada iyo waxa aan arki doonno mustaqbalka Cimilada Jarmalka Maaddaama mawduucyada sida kuwan ay ka mid yihiin mowduucyada lagu xuso waqti ka waqti nolol maalmeedka Bilaha Jarmalka Waa lagama maarmaan in si fiican loo xafido.
Waxaan si adag kugula talineynaa inaad ku qaadatid imtixaanka maadada yar mawduuca ka dib markaad si fiican u aqoonsatid bilaha iyo xilliyada Jarmalka.
Hada ha tagno booska.
Ugu horreyntii, fiiri magacyada xiddigaha Jarmalka ee miiska saaran.
Ka dib, aan ku qorno qoritaanka iyo akhrinta bilaha Jarmalka.
Ka dibna fiiri xilliyada Jarmalka iyo maalmaha jarmalka.
Bilaha Jarmalka (Die Monate)
Bilaha Jarmalka sida ku cad jadwalkan hoose.
Hadda waxaad arki kartaa hingaadka iyo akhrinta midka Jarmalka hal liis ay ku qoran yihiin:
Qaybaha kumbuyuutarku waxay tilmaamayaan akhrinta, calaamadda: calaamad muujinaysa in siyaabihii hore loo akhrin doono wax yar ka dheer.
Janaayo: Januar (kaddib)
Maarso: März (megts)
Abriil: Abriil (Abriil)
Agoosto: Agoosto (Agoosto)
Oktoobar: Oktober (okto: ba :)
Noofembar: Noofembar (novemba :)
Diisambar: Dezember (detsemba :)
Jarmalka Jumladaha leh Nambarada Isreebka
Saaxiibada qiimaha badan, casharada Jarmal iyo buugaagta Jarmal iyo sidoo kale tirada yihiin verilir.örneg magaca bisha shooladda ugu horeysay ee ay la socdaan bilood tirada horsanaanta si ay u baraan labada bilood, magaca bishii labaad ee February, magaca bisha saddexaad ee March, bisha afraad ee magiciisu yahay April sida.
Waxaan sidoo kale arki doonaa amarka Jarmalka ee nidaamkaan, oo ay weheliso tirada amarrada:
Dhamaan Waalidiinta Januar
Seddexda koox ee ugu sareeya horyaalka
Der midweyna Monat heißt September
Sidaad ogtahay, sanadkiiba waxaa jira 4 xilli.. Xaqiiqda ah in ay jiraan afar xilli sannadkii waa xaqiiqo caalami ah oo la aqbalay, inkastoo waddamada qaarkood aysan jirin afar xilli sanadka dhexdiisa. Tusaale ahaan, wadamada adduunka qaarkood, xilliga jiilaalka ayaa laga yaabaa inaan si sax ah loo arkin sida aan ku nool nahay waddankeenna. Wadamada qaarkood, xilliga xagaaga si buuxda looma soo maray. Laakiin waxa aan u baahanahay in aan ogaano in ay jiraan 4 xilli sanadkii.
hadda Xilliyada Jarmalka Aan u gudubno mowduuca.
hoos ku Xilliga jarmalka Waxaan ku qornay magacyadooda iyo kan turkiga hortooda. Waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u barato oo aad xifdiso.
dayrta : dhici
Winter : jiilaalka
Frühling : guga
Sommer : xagaaga
Waa maxay bilaha ku jira Jarmalka xilli ciyaareedkee?
Bilihii Jarmalka iyo xilliyadii Jarmalka
December December March Mart June June September September
January January April April Juli July Oktober October
Februar February May May August August November November
Shaxda kor ku xusan labadaba Xilliyada Jarmalka iyo bilaha xilliyadan gudahood lagu muujiyey.
Guga: Frühling (frü: ling)
Dayrta: Herbst (herpst)
Waxaan soo bandhignay bilaha Jarmalka sida ku xusan xilliyada jadwalka kore.
Bilaha Dezember, Januar iyo Februar waxaa la helaa xilliga jiilaalka.
Xilliga gu'ga, oo yimaada xilliga qaboobaha ka dib, waxaa jira bilooyin März, Abriil iyo Mai.
Bilaha Juni, Juli iyo Ogosto waa xagaaga, kaas oo yimaada guga kadib.
Xilliga dayrta, oo yimaada ka dib xilliga xagaaga, waxaa jira bilaha Sebtember, Oktoober, iyo Noofambar.
Xukunnada bilaha Jarmalka
Hadda oo aan barannay mowduuca bilaha Jarmalka, waxaan sameyn karnaa xukunno ku saabsan bilaha Jarmalka.
Ha weydiinin su'aasha ah bilkee ayaan Jarmal ku nahay:
Welcher Monat waa heute?
(Bishee ayaynu ku jirnaa?)
Welcher Monat waa heute? (Bishee ayaynu ku jirnaa?)
Monat waa Oktoobar. (Waxaan joognaa Oktoobar)
Monat ist Juni. (Waxaan ku jirnaa Juun)
Monat waa Abriil. (Waxaan ku jirnaa Abriil)
Monat ist Mai. (Waxaan nahay Maajo)
Monat ist Januar. (Waxaan ku jirnaa Janaayo)
Saaxiibbada qaaliga ah, ka dib barashada bilaha Jarmalka, hadda aan si kooban u siino macluumaad ku saabsan maalmaha Jarmalka maadaama ay khusayso mawduuca.
Maalmaha iyo Bilaha ee Jadwalka Jarmalka
Hoos waxaa ku qoran jadwalka tusaalaha ee ay diyaariyeen boggeena. Bilaha iyo maalmaha Jarmalka guud ahaan waxaa lagu muujiyaa jadwalada sida soo socota.
Bilaha Jarmalka iyo Jadwalka xilliyada Jarmalka
Bilaha Jarmalka iyo xilliyada waxaad akhrineysaa sheekadayada Maalmaha Jarmalka waxaad mawduuca ku akhrisan kartaa bog kale.
Jarmalka iyo Sayniska Jadwalka Imtixaanka
Waxaan kugula talineynaa inaad xalliso imtixaanka bilaha Jarmalka mawduuceena imtixaanada Jarmalka, saaxiibada qaaliga ah. Bilaha Jarmalka iyo xilliyada Jarmalku waa maaddo inta badan lagu dhigto fasalka 9aad.Ardayda aan qaadan casharro Jarmal ah oo ku filan fasalka 9aad waxay kaloo arki karaan bilaha Jarmalka ee fasalka 10aad. Dhanka kale, ardayda bilaabay barashada luqadda ajnabiga da'da hore waxay qaadan karaan koorsada bilaha Jarmalka iyo xilliyada Jarmalka ee fasalka 6-7aad ama 8aad.
Waad ku qori kartaa su'aalo iyo faallooyin ku saabsan casharadeenna Jarmalka ku saabsan fagaarayaasha almancax.
Ku soo biir forumyada almancax oo in ka badan 35.000 xubnood ka diiwaan gashan yihiin, kuna raaxee barashada Jarmalka Jarmalka si wada jir ah.
Almancax waxay leedahay wax kasta oo aad ugu baahan tahay barashada Jarmalka.
# Bilaha Jarmalka (Die Monate)
# Jarmalka Jumladaha leh Nambarada Isreebka
# Waa maxay bilaha ku jira Jarmalka xilli ciyaareedkee?
# Xukunnada bilaha Jarmalka
# Maalmaha Jarmalka
# Maalmaha iyo Bilaha ee Jadwalka Jarmalka
# Jarmalka iyo Sayniska Jadwalka Imtixaanka
Tags: 10. fasalka nasiibka mawduuca, 9. fasalka nasiibka mawduuca, magacyada jarmalka, magacyada jarmalka, bil walba, bisha janaayo, Magacyada Jarmalka, Xilliyada Jarmalka, Xilliyada Jarmalka, bilo germany, xilliyada Jarmalka, bil ah alman, Jarmalka bilaha, xilliyada germany